Nihaona an-tserasera voalohany ny Lingua Alemà · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Jolay 2019 6:28 GMT
(Lahatsoratra tamin'ny volana Jona 2015)
Ny Lingua alemà nihaona voalohany tamin'ny aterineto ny 4 Jona 2015.
Efa teo aloha ny vondrom-piarahamonina Lingua Alemà no niezaka nivory hanatrika fivoriana isam-paritra, saingy noho ny zava-misy fa monina any amin'ny tanàndehibe maro samihafa manerana izao tontolo izao ny mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina Lingua alemà dia sarotra ny mahita toerana mety hanaovana fivoriana. Indrindra fa ny 60%-n'ny mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina fotsiny no monina any Alemaina.
Ny isan'ny vondrom-piarahamonina Lingua Alemà , sary nataon'i Anne Hemeda mifototra amin'ny antontanisan'ny mpisera.
Noho izany, nokarakaraina ny fivoriana tamin'ny alàlan'ny skype ho solon'ny fihaonana amin'ny tsirairay ary mpikambana miisa valo avy any Manchester (Angletera), Turin (Italia), Ebensee am Traunsee (Aotrisy), Leipzig, Heidelberg, Bonn ary Essen no niahaona tamin'ny fomba virtoaly.
Niresaka momba ny fampiasana ny vondrona google izahay sy ny fomba ary ny antony ampiasana ny lisitry ny vondrom-piarahamonina amin'ny ankapobeny. Na dia amin'ny asan'ny vondrom-piarahamonina mpandika teny aza no nifantohanay dia noresahanay ny fahalianana amin'ny fifandraisana bebe kokoa amin'ireo mpandika teny avy amin'ireo vondrom-piarahamonina Lingua hafa sy ireo mpanoratra ireo lahatsoratra izay nadika tamin'ny teny Alemà.
Naneho manokana ny fahalianana amin'ny fanontaniana sy ny fifanakalozan-kevitra mikasika ireo fanamby atrehinay rehefa mandika teny toy ny dikateny marina amin'ireo fanafohezana anarana sy ny fanafohezan-teny amin'ny sioka na ny fampiasana fiteny saropady amin'ny miralenta ny vondrona .
Tena mavitrika amin'izao fotoana izao ny vondrom-piarahamonina Lingua Alemà. Mpikambana miisa 48 no nandika lahatsoratra miisa 647 tamin'ny taona 2014 ary namoaka lahatsoratra miisa 96 izahay tao amin'ny pejinay tamin'ny volana May 2015. Mandika lahatsoratra avy amin'ny teny Anglisy sy Italiana ary Frantsay, Portiogey, Espaniola ary Arabo ihany koa izahay. Hatreto, afaka mandika lahatsoratra avy amin'ny fiteny miisa 18 ny vondrom-piarahamoninay. Mitantana dosie samihafa izahay, ny dimy amin'izy ireo no havaozina tsy tapaka.
Nanombohana ny fivoriana an-tserasera tsy tapaka ho an'ny vondrom-piarahamoninay ity fihaonana voalohany tamin'ny aterineto ity. Hanao fihaonambe amin'ny alàlan'ny antso izahay amin'ny fivoriana ankapobeny hiresahana lohahevitra manokana, hampidirana ireo endri-baovao sy torolalana ary ihany koa mba hiresahana momba ny fahasarotana sy ny fanamby.
Manantena ny fifanakalozan-kevitra mavitrika ao anatin'ny vondrom-piarahamonin'ny Global Voices izahay!